Akanjo mahazatra an'i Peroa, manao ahoana ny satroka peroviana? | Vaovao momba ny dia
Susana Maria Urbano Mateos | | America, Toerana fitsangatsanganana
Firenena iray dia fantatra amin'ny alàlan'ny endriny, ny mozikany, ny dihiny, ny lokony, ny olony ary, tsy isalasalana, ny fitafiany. Ny akanjo dia tsy ampahany amin'ny taranaka iray fotsiny na vanim-potoana iray, dia ampahany amin'ny ampahany firenena na faritra iray koa. El satroka peroviana ohatra mazava amin'izany.
Firenena manana faritra maromaro i Però, misy fety tsy tambo isaina, firenena iray matsiro ny mponina ao aminy fifangaroana fangaro sy firazanana, samy manana ny mombamomba azy ny tanàna tsirairay fa tsy manary izany fifangaroan'ny loko sy tsiro izany. Izany rehetra izany dia aseho tsy amin'ny sakafon'izy ireo ihany, fa amin'ny fitafiana an'ny tanàna tsirairay sy ny fetiny. Andao hahafantatra bebe kokoa momba ny satrony peroviana sy ny fitafiana peroviana.
Ny akanjon'ny tendrombohitra dia miavaka amin'ny lokon'ny zipo sy ny ponchos, indrindra amin'ny departemantan'i Arequipa, Cusco, Cajamarca, Ayacucho, Puno ary amin'ireo tanàna hafa any an-tendrombohitra, na dia tsy mitovy aza ny fomba fitafiana, dia misy zavatra mampiavaka azy izy ireo mitovy, vita amin'ny volon'ondry vicuña na sasany amin'ireo auquénid tsara tarehy ananan'ny tendrombohitra, hiarovana ny mponina amin'ity faritr'i Peroa ity amin'ny hatsiaka mitafy ny chullo izy ireo, izay toy ny volon'ondry mandrakotra ny sofina. Ireo mpandihy scissor dia manamboatra ny akanjony amin'ny fitaratra ary manao amboradara ny andriamaniny ao an-damosin'izy ireo.
Amin'ny morontsiraka, vita amin'ny landihazo ny ponchos sy ny zipo, na dia mandihy marinera aza, landy dia nosoloina landy ho an'ny vehivavy. Ny akanjon'ny lehilahy dia matetika manao satroka vita amin'ny mololo mba hiarovana azy ireo amin'ny masoandro.
Any anaty ala, ny lehilahy sy ny vehivavy avy amin'ny foko sasany dia manao akanjo akanjo nozairina tamin'ny sisiny ary voaravaka sary sy loko geometrika avy any amin'ny faritra., io akanjo io dia antsoina hoe cushma.
Fampahafantarana fohy momba ny akanjo Peroviana ity, saingy izao aho te-handalina lalina kokoa ilay lohahevitra mba hahafantaranareo tsara ny momba azy.
1 Mpanao asa tanana lehibe ny Peroviana
2 Tantara kely momba an'i Peroa
3 Akanjo ho an'ny lehilahy any Peroa
4 Akanjo vehivavy Peroviana
5 Ny satroka peroviana
5.6 Manafaka azy
Mpanao asa tanana lehibe ny Peroviana
Mpanao asa tanana tena tsara ny peroviana, vita an-trano ny akanjony ankehitriny na dia amin'izao taonjato faha-XNUMX izao aza ary azo ankasitrahana toy ny akanjo nentim-paharazana nampiasaina taonjato maro lasa izay. Any Però, ny olony dia mitafy ponchos, akanjo, lamba firakotra, akanjo mafana, zipo miloko, akanjo lava, satroka, chullos, ary akanjo hafa tera-tany.. Ny akanjo nentim-paharazana an'i Peroa dia maro loko sy mamirapiratra, tsara tarehy sy tena tany am-boalohany na dia matevina aza ny akanjo. Ankafizin'ny mpizahatany ny hakanton'ny akanjo vita tanana ary maka akanjo fahatsiarovana foana izy ireo avy amin'ny tsena peroviana, ary tsy mahagaga izany!
Tantara kely momba an'i Peroa
Manana tantara lava i Peroa ary tena mahavariana. Ity firenena ity dia resin'ny Empira Espaniola tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ireo Espaniola mpandresy dia nisy fiantraikany tamin'ny kolontsaina Peroviana fa ny mponina tao dia nahavita nitahiry ny kolontsainy manokana tamin'ny fomban-drazany, ny fomba amam-panao ary ny finoany.
Ny iray amin'ireo mampiavaka ity firenena ity dia ny mpanao asa tanana Peroviana. Ny vokatra vita amin'ny lamba dia hajaina any amin'ny firenen-kafa. Ny mpizahatany rehetra dia mankafy ny hakanton'ny fitafiana tanan-tanana any an-toerana ary maniry hividy zavatra amin'ny tsena peroviana miloko.
Ny akanjo avy any Peroa dia manana toetra mampiavaka azy toy ny mafana be (satria any Andes dia mangatsiaka ary manana toetr'andro miovaova be izy ireo mandritra ny taona) ary natao an-trano izy io. Ny akora lehibe fanamboarana akanjo dia volon'ondry alpaca. Ankoatr'izay, ny akanjo dia manana endrika geometrika sy loko marevaka izay mahatonga azy ireo tsy manam-paharoa sy tsy azo tononina.
Akanjo ho an'ny lehilahy any Peroa
Matetika ny lehilahy dia miakanjo akanjo miendrika diamondra, izay ilay poncho manana loko mamirapiratra ary mafana be. Izy io dia sombin-javatra lehibe misy fisokafana eo afovoany hametrahana ny loha. Betsaka ny karazany (miankina amin'ny faritra izany) ary miankina amin'ny tanjon'izy ireo no ampiasaina. Na dia misy lehilahy mampiasa azy isan'andro aza, ny mahazatra dia ny mampiasa azy amin'ny hetsika manokana.
Tokony ho raisina ihany koa fa ny lehilahy any Peroa dia manao satroka miaraka amina tarika manokana antsoina hoe "centillo". Izy ireo dia maro loko ary tena fety, na dia ny chullo aza no satroka malaza indrindra. Ny chullo dia singa vita amin'ny tanan-tànana, voatenona, misy saron-tsofina sy tassels, vita amin'ny alpaca, llama, vicuña na volon'ondry.
Tsotra ny pataloha ary ny akanjo ba vita amin'ny alpaca, llama na volon'ondry. Ny akanjo ba mafana dia mafana ary matetika dia misy firavaka geometrika sy famolavolana biby pirinty.
Akanjo vehivavy Peroviana
Ny ampahany lehibe amin'ny akanjo mahazatra an'ny vehivavy eto amin'ity firenena ity dia: ponchos, akanjo, lamba firakotra, zipo, akanjo lava ary satroka. Ny akanjo na akanjo tsirairay dia samy hafa be amin'ny faritra iray ka hatrany amin'ny faritra hafa, satria amin'izany fomba izany dia azon'izy ireo atao ny mampiseho ny mampiavaka ny tanàna na tanàna tsirairay. Ohatra, ny olona dia afaka milaza raha avy amin'ny tanàna na tanàna ny vehivavy amin'ny fijerena ny satrony na raha avy amin'ny fianakaviana manankarena na mahantra izy.
Ny vehivavy matetika dia manao lamba soroka, izay sombin-kazo vita am-pelatanana. Ampahany nentim-paharazana io ary apetraka amin'ny soroka ity manda ity ary tsy mihetsika amin'ny alàlan'ny famindrana azy eo amin'ny handrina sy famatarana azy eo amin'ny tapany aloha amin'ny tratra. Ny vehivavy koa dia nanana barrette vita tanana nantsoina hoe "tupu" na tupo "ary noravahana vato soa izy ireo taloha. Androany izy ireo dia matetika mampiasa bolt. Ireo lamba soroka ampiasain'ny vehivavy dia antsoina hoe: lliclla, k'eperina, awayu ary unkuna ary avahana amin'ireto manaraka ireto:
Llicla Izy io dia lamban-dehilahy mahazatra indrindra izay ampiasaina any ambanivohitra.
K'eperina Izy io dia lamba lehibe izay matetika ampiasaina hitondrana zazakely sy entana hitaterana azy ireo avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa.
Awayu Mitovy amin'ny lliclla izy nefa lehibe kokoa sy mifamatotra ary ampiasaina hitondra zazakely sy entana koa.
Unkuna Izy io koa dia lamba mitondra fa kely kokoa ary ampiasaina hitondra sakafo.
Akanjo palitao sy palitao no entina ao ambanin'ilay lamba soroka. Ny akanjo ba matetika dia sentetika ary misy loko maro. Ny palitao dia vita amin'ny lamba volon'ondry ary nantsoina hoe "juyuna" ary matetika izy ireo dia manaingo ny vatan'ilay vehivavy.
Ny moron-tongotry ny vehivavy Peroviana dia antsoina hoe "polleras" na "melkkhay”Ary tapahina ao anaty tarika miloko antsoina hoe“ puyto ”. Tenona tanana sy vita amin'ny lamba volon'ondry izy ireo. Matetika izy ireo dia sosona sy mitafy, nopetahany sosona izy ireo dia afaka miseho mibontsina, ary mazava ho azy maro loko sy mamiratra izy ireo.
Samy mampiasa ajota daholo na lahy na vavy (kiraro vita amin'ny kodiarana camion recycled) izay vita an-trano ary tena mora vidy.
Ny satroka peroviana
Ny satroka perovianaFombafomba izay nanintona mafy ny sain'ny olona mitsidika ny firenena izany, satria mitazona toetra mampiavaka azy manokana izay manintona ny sain'ny olona mankafy azy izy ireo. Matetika, endri-doha satroka izany no ampiasaina, ny loko na ny fomba nanamboarana azy dia mifandraika amin'ny fahafaha-manao ara-toekarena, satria mazava fa miovaova ny fomba amam-panao any amin'ny faritra, ankoatry ny fanaovana toy izany koa ny satroka, satria mifanaraka mifanaraka amin'ny filan'ny mponina any amin'ny faritra.
Hiresaka momba ny satroka mahazatra indrindra hita any Peroa tsara tarehy isika izao.
ireo vita amin'ny ravina palma ny satroka iharan'ny masoandro mahery mandritra ny fotoana maharitra, ka mandray loko fotsy izy ireo, ary avy eo manome endrika ny voalaza Ny satroka peroviana dia matetika voaravaka kofehy mainty.
Ny anarany dia avy any Pirua, izay toerana ampiasana azy matetika indrindra noho ny morontsiraka avaratra mahafinaritra.
Izany dia Satroka peroviana amin'ny fampiasana nentim-paharazana, izay matetika ampiasain'ny vehivavy amin'ny vanim-potoanan'ny fety, dia kely ary manana koma kely. Matetika no noravahan'izy ireo voninkazo na singa maro loko izay misy fiatraikany amin'ny maso. Volon'ondry izy io.
Amin'ny Quispillata, matetika ny tovolahy no mampiasa azy io tsy misy haingo, na amin'ny vanim-potoana mangatsiaka.
Ao amin'ity toerana ity, ny satroka mahazatra dia mizara roa lahy sy vavy.
Ny lehilahy, ho hita matetika mitafy izy ireo satroka vita amin'ny volon'ondry, izay ampiasaina isaky ny alahady; ho an'ny fialantsasatra dia novaina ireo izay hampiakarina ny elatry ny handrina, ankoatra ny haingoana voninkazo
vehivavy etsy ankilany entin'izy ireo satroka volontany, volondavenona na mainty, izay hamboarina amin'ny volon'ondry. Matetika ny tovovavy tokan-tena dia mandravaka ireo satroka ireo amin'ny voninkazo mareva-doko ary amin'ny tranga sasany dia mampiasa voninkazo tena izy.
Eto, ny satroka manjaka dia ireo manana kaopy ambany izy ireo, izay hamboarina amin'ny volon'ondry. Izay mitazona loko volondavenona, mainty, maizina ary loko mainty. Izay ho voaravaka kofehy miampita azy ireo mitsangana.
Ny vehivavy matetika no miakanjo satroka vita amin'ny volon'ondry sy mololo, izay voaravaka kofehy ary ireo dia ho masaka mamorona ravina (ribety).
Ny lehilahy, tsy toy ny vehivavy, dia hanana satroka azo amboarina amin'ny akora samy hafa, volon'ondry sy mololo ny iray amin'izy ireo, ny iray volon'ondry hazaina, izay azo nolokoana volondavenona. Ireo dia ho voaravaka kofehy volon'ondry maro loko.
Amin'ity faritra ity dia miavaka amin'ny tantsaha lehibe. Ny satroka izay hanjakazaka amin'izany dia ireo izay vita amin'ny tavy legioma: Ny palma, ny hazondamosina ary ny shawl.
Eto dia azo atao ny manavaka ny ambaratongam-pahefana, satria ilay manana fahefana amin'ny mpiasa mazàna mandeha mitaingin-tsoavaly, ankoatran'ny manao satroka kanto misy molotra midadasika be, izay hatao amin'ny felatanana.
Ao amin'ny Faritra Moquegua, miavaka ny akanjo Ho an'ny iray amin'ireo tena tany am-boalohany sy nampirehareha, amin'ity faritra ity dia afaka ampiasan'ny vehivavy sy ny lehilahy ny satroka, izay misongadina ny satroka voaravaka voninkazo sy zipo nalahatra, izay hampiasaina amin'ny fankalazana.
Toerana manan-karena kolontsaina i Però, ary rehefa nandeha ny fotoana dia nihena ny tantaram-pirazanana, izay nahatonga ny fanamboarana ny akanjony, saingy noho ny fomba amam-panao izay mbola miorim-paka lalina ao amin'ny olony, dia zaraina sy ampianarina izy ireo amin'ny taranaka vaovao. Tsy isalasalana fa ny satroka peroviana dia ireo izay miavaka amin'ny maha-izy azy sy ny hatsarany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Akanjo mahazatra an'i Peroa
Te hanana fampahalalana bebe kokoa aho ny anaran'ny akanjo tsirairay sns
Ny akanjo mahazatra Peroviana dia tsy lamba tsotra, kolontsaina miaraka amin'ny mozika, dihy, fivorian'ny fianakaviana, sns. ao anatin'ny fianakaviana sy vondrona sosialy ao amin'ireo firenena ireo. Misy tantara iray ao ambadiky ny loko tsirairay. LIVE!
Eleanor dia hoy izy:
Azafady, mila fantatro hoe manao ahoana ilay blouse an'ny akanjo tantsambo Ayacuchan, indrindra ny hatoka izay noho ny akanjo dia tsy avelako ho hitako raha vozona na toradroa ilay izy. Misaotra betsaka, miandry ny fanampianao aho ary mangataka izany haingana.
Valiny tamin'i Leonor
Traikefa nahafinaritra 5 hiaina amin'ny dia any Frantsa